Arahaba hatrany, arahaba sesilany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
La CNaPS rejoint Maintirano malgré l’insécurité et l’éloignement il y a 7 jours
La Caisse met l’accent sur la Santé et Sécurité au Travail (SST) durant le SIH il y a 8 jours
50 agents bénéficient d’une formation par la CNaPS il y a 10 jours
Une centaine de jeunes du SEFAFI bénéficient d’une formation sur la sécurité sociale il y a 13 jours
Le sondage autocensuré un geste abscons il y a 14 jours
Nangonin'i R. Jn Bà il y a 10 mois
Firarian-tsoa ho an'ny MPANKAFY an'i NITIAH NOSY - POETA
Arahaba velon'aina e,
enga ny andon'ny maraina
hamelombelona eo foana!
Arahabaina ny kilonga,
irariana tsy ho farofy,
ho salama, ho dongadonga,
ho ampoky ny tositosy!
hamelana, ho manimanitra,
hanamaitso ny lalovana!
Ry lehilahy arahabaina e,
enga ho tomady hatrany
f'ianareo no andrandraina,
hanabe voho ny tany!
Ho taonan'ny fifankatiavana!
Ho taonam-panitsiana lalana!
Ho taona zina, hahombiazana,
hitomboan'ny eo an-tanana!
Mirary soa e!
Vaovao ny taona,
asa hanao ahoana?
Ny hany hirariana
dia ho taona zina;
ny loza sy herisetra,
ny aretina etsetra!
Ny tanjona kinasa,
tsy maintsy arahin’asa,
mba tsy ho verivery,
na ho zava-poana,
‘lay maha-vao ny taona;
fa mba ho fiotazana
soa sy fahombiazana!
Tsy foinao fafana
ilay hafatra kely
nalefany ho anao
namoha ny fonao
toa mbola natory.
ho an'ireo namana
Kanefa aminao ?
- hafatra lafatra.
Isa-maraina dia io no banjinina
Isan-kariva dia io no fihinina
Revo eo mamaky,
Fahoriana ho azy
Hivalona tanteraka ity taona nodiavina
Nifandimbiasan'aizina sy andro nibaliaka
Nisy teto mamy sy ngidy tsy hay nolavina
Na ny fo nifankatia na ny adiadintsika
Fa namaivay ny tsy fandriampahalemana
Nisy maromaro ireo voaroaka tamin'ny taniny
Niakatra matetika ihany koa ny vidim-piainana
Azo ambara mihitsy fa nanjaka ny tsy rariny
Nisahotaka ny mpianatra fa nisy koa ny pesta
Iray volana be izao tsy niditra an-tsekoly
Ireo Ray aman-dReny nangina tsy afa-nihetsika
Na dia oriory sy narary tao am-pony
Fa nisy maromaro ireo nahazo fahasoavana
Asa,zanaka, vady ihany koa
Arahabaina ianareo tsy asiana avakavaka
Mahareta hatramin'ny farany ary dia mirary soa
ARAHABAINA NAHATRATRA NY TAOM-BAOVAO
Arahabaina madinidinika, nahatratra ny taom-baovao.
Nahatsipaka amin-kery iny taona mafy lasa iny ;
Taona lasa tena mafy, toy ny zioga sy ny bao ;
Nampitaintaina, nampanembona ny tsara lasa fahiny.
Arahabaina tsy ankanavaka, tsy maty fo aman'aina ;
Niangaran'ny vintana ka mbola velon'aina ankehitriny,
Na ny nandova tany lonaka, na koa ny tany karankaina.
Izay ananana ifaliana, ary tsy tokony ifanomezan-tsiny.
Arahabaina am-panajana ny ray aman-dreny sy ny zoky ;
Hazo amoron-tevana hono, kanefa tena nijoro hatrany.
Tsy hadino koa ireo zandry, sy ireo taranaka mahatoky,
Vato mandondona e, kanefa tsy nianjera tamin'ny tany.
Hikapa hahita ny tonony, ary handidy hahita ny vaniny.
Ho ambinin-java-manasatra amin'izay rehetra hatao.
Ka hahomby eny foana amin'ny adidy rehetra sahaniny.
Ka ho tsongoin'olom-bolo eo anivon'izao tontolo izao.
Ho mamy tian'ny vola ; ary ho mangidy lavitry ny faty.
Ny làlana hombana koa, ho lavitry ny loza amin'antambo.
Ka izay rehetra kasaina, tena hitondra fifaliana anaty ;
Na an-tsaha, na an-tanàna, na koa hatrany anaty sambo.
Tsy ho solafaka an-dàlana ; ary tsy ho fotsy rora miteny.
Hisitraka ny tsiron'ny tany, hirotsahan'ny andon'ny lanitra.
Na matory, na mifoha, na koa mandeha eny rehetra eny.
Eo ambany fiarovana, sy fitahian'ilay Tompo Andriamanitra.
02 Janoary 2018
Fifidianana : Misy kandidà mikonikonina ny fanemorana ny fifidianana - il y a 2 jours
JMJ Maha-9 : Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara - il y a 3 jours
Concert de rock : Airtel Madagascar sponsor officiel de Allkiniah, Iniah et Sasamaso - il y a 16 jours
Quatuor Squad : Airtel aide le groupe a soufflé sa première bougie sur scène - il y a 25 jours